﻿﻿ Wararkii ugu dambeeyay Afgooye iyo Ciidamada DF oo dib ula wareegay | Codkagalmudug isha Laga Helo Wararka Xaqiiqda
Wararkii ugu dambeeyay Afgooye iyo Ciidamada DF oo dib ula wareegay
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dib ugu laabtay degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha Hoose, saacado kaddib markii ay la wareegeen Dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qarax iyo dagaal toos ah ku qaaday gelinkii dambe ee maanta.
Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Najax ayaa sheegay in ciidamada ay dib ula wareegeen degmada Afgooye, isla markaana ay wali wadaan howl gallo.
“Degmada waxaa ku sugan ciidanka dowladda, Al-Shababki soo weeraray hareeraha magaalada ayay ku sugan yihiin, waxaa socda howl gal”ayuu yiri Guddoomiyaha Gobolka Shabeellaha Hoose.
Rasaas goos goos ah ayaa caawa fiidkii laga maqlayay dhinaca galbeed ee magaalada, dadka deegaanka ayaa sheegaya in Al-Shabaab ay isaga baxeen deegaanka abaarihii maqribkii.
Ciidamo ka tirsan Milateriga Soomaaliya iyo kuwa Nabadsugida oo gurmad ahaan uga baxay Muqdisho ayaa gaaray degmada Afgooye, sidoo kale Ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan AMISOM ayaa iyana gaaray Afgooye.
Wararka qaar ayaa sheegaya in mid ka mid ah gurmadkii ciidan ee ka baxay Muqdisho loo galay agagaarka deegaanka Lafoole, halkaasoo qarax miino lala eegtay gaadiid dagaal.
Dagaalkii galabta Afgooye ayaa socday ku dhowaad labo saacadood, iyadoo Al-Shabaab la wareegeen xarunta degmada, saldhiga booliska iyo xarumo kale, waxaa la sheegayaa in Al-Shabaab ay ka qaateen gaadiid kala duwna ee yaalay deegaanka.
Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa wali cadeyn, hase ahaatee warar soo baxaya ayaa sheegaya in dhowr sarkaal ku dhimatay dagaalka oo ka tirsanaa ciidanka dowladda.
Mas’uuliyiinta lagu dilay dagaalkii Afgooye ayaa waxaa ka mid ahaa Maxamed Dahir Qooley oo ahaa Isku duwihii Wasaaradda Maaliyadda.
Waa markii u horeysay ee Al-Shabaab la wareegaan saacado degmada Afgooye, afar sano kaddib markii halkaas horay looga saaray.
go site Alshabaab oo caawa soo galay deegaano Hoos yimaada Cadaado
buy Tastyliaonline no prescription Sawiro-Xaaf iyo wasiirka qorsheynta Soomaliya oo kormeeray Halka laga dhisayo dakada Hobyo.
order Lyrica online usa Sawiro-Madax badan oo gaartay Hobyo…